Ogaden News Agency (ONA) – Warbixinta Dagaaladii ugu dambeeyay ee Xarunta Dhexe aan ka helnay
Warbixinta Dagaaladii ugu dambeeyay ee Xarunta Dhexe aan ka helnay
Posted by ONA Admin	/ October 26, 2013
Wararka ka imaanaya wadanka Ogadenia gaar ahaan xarunta dhexe ee JWXO ayaa sheegaya dagaalo aad tiro badan oo ciidamada gumaysiga lagu naafeeyay dagaaladaas oo kadhacay meela kala duwan oo wadanka Ogadenia ah. Dagaalad aan helnay warbixintooda oo dhacay intii u dhaxeysay 10-24kii bishan oktobar ayaa cadawga ka soo gaadheen khasaare laxaad leh oo isugu jira dhimasho gaadhaya 73 askari oo darajooyin kala duwan lahaa iyo dhaawac tirabadan. Dagaalada qaar ayaan faahfaahin laga haynin khasaaraha cadawga, waxayna u dhaceen sidan;
10/10/13 Dhoodiwaal oo dagmada Shaygoosh ee Gobolka Qoraxay katirsan dagaal kudhexmaray CWXO iyo kuwa saamalaluudka ah ee gumaysiga waxaana ciidanka cadawga halkaas lagaga dilay 4 askari 5 kalana waa laga dhaawacay.
13/10/13 CWXO ayaa weerar culus kuqaaday Garoonka dayuuradaha ee magaalada Qabridahare waxay N/hurayaasha CWXO halkaas kudileen 17 askari 23 kalana way kudhaawaceen.
13/10/13 Shabeelay oo Qabridahare udhaw dagaal kadhacay waxaa ciidanka cadawga lagu gaadhsiiyay khasaare aan faahfaahintiisa lahaynin.
14/10/13 Gol-meher oo Galaalshe udhaw dagaal kadhacay waxaa ciidamada nacabka ah ee gumaysiga lagaga dilay 2 askari 4 kalana waa laga dhaawacay.
16/10/13 Gasaara oo Qabridahare katirsan dagaal xoogan oo CWXO iyo kuwa gumaysiga kudhexmaray ayaa ciidanka wayaanaha lagaga dilay 5 askari 7 kalana waa lagaga dhaawacay.
17/10/13 Dhalu oo Galaalshe udhaw waxaa ciidanka wayaanaha lagaga dilay 7 askari 4 kalana waa lagaga dhaawacay.
18/10/13 Goldheer oo dagmada Dhoobawayn ee gobolka Qoraxay katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka gumaysiga lagaga dhaawacay 2 askari.
20/10/13 Dhabayaray oo dagmada gunagado ee Gobolka Jarar katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka gumaysiga lagaga dilay 15 askari tiro kalana waa lagaga dhaawacay.
21/10/13 Xadhadhamo oo Qabridahare katirsan iyo Xamudhlay oo Dhoobawayn katirsan dagaalo kadhacay oo cashiro loogu dhigay ciidamada gumaysiga ee niyada jabsan waxaana goobahaas lagaga dilay 20 askari in kabada 22 kalana waa lagaga dhaawacay.
21/10/13 Bali-dhubad oo Qabridahare katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidamada gumaysiga lagaga dilay 5 askari 7 kalana waa lagaga dhaawacay.
22/10/13 Duudsarmaan oo Gunagada udhaw waxaa ciidanka cadawga lagu gaadhsiiyay khasaare aan faahfaahintiisa lahaynin.
23/10/13 Qilaaroobe oo Galaalshe udhaw waxaa ciidanka cadawga lagu gaadhsiiyay khasaare aan faahfaahintiisa lahaynin.
24/10/13 Adhicadayowga oo Dagmada Garbo ee Gobolka Nogob katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka wayaanaha lagaga dilay 4 askari 5 kalana waa lagaga dhaawacay.
24/10/13 Feedhacade oo Galaalshe udhaw iyo Goldheer oo Qabridahare waxaa ciidanka gumaysiga lagaga dhaawacay 8 askari dhimashadana wali faahfaahin lagamahayo.